July 2014 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Computer software Typing
mmitdeveloper at 4:38:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒီဆော့ဝဲလေးက တော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာ။PCကိုအ ခြေခံက နေစ လေ့လာမယ့်ညီငယ်ညီမငယ်များတွက်ဂိမ်းလဲဆော့ရလက်ကွက်လဲကျင့်ပြီးသားဖြစ်နေမယ့်Typingဆော့ဝဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
mmitdeveloper at 4:37:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။PCမှာကိုယ်မမြင် စေချင် မ တွေ့စေချင် တဲ့FolderတွေကိုHide,Lockစတာတွေကိုပြုလုပ်နိုင် မယ့်Folder Lockလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Computer software Image Recorder
mmitdeveloper at 4:36:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။PCမှာScreenshotရိုက်ချင် တဲ့မိတ်ဆွေများတွက်Screenshotဆော့ဝဲလေးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၀ မိနစ်အတွင်း Facebook အလွယ်ဖွင့်နည်း ( Code မတောင်းပါ )
Maung Pauk at 4:10:00 AM 1
ဒီနည်းကို မနေ့ကတည်းက ပြောပြချင်နေခဲ့တာပါ.. ကျွန်တော်လည်း ညီးလေးတစ်ယောက် ပြောပြလို့ လုပ်ကြည့်တာ. ခဏလေးပဲကြာတယ်.. လုပ်နည်း ကြည့်ရအောင်..
ပထမဆုံး ကိုယ့်မှာ Facebook Account မဖွင့်ရသေးတဲ့ Gmail သစ် တစ်ခု ရှိထားရပါမယ်.. မရှိရင် Gmail အမြန်ဖွင့်နည်း ပြောပြပါမယ်..
1. ဖုန်းမှာ Chrome Browser ရှိရပါမယ်.. အခြား Browser တွေက အချိန်ကြာပြီး အဆင်မပြေတာ များလို့ပါ.. မရှိရင် အောက်မှာ ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ..
2. ဖုန်း အင်တာနက်ကို ဖွင့်ပြီး Chrome Browser ရဲ့ အပေါ်ဆုံးက Address Bar ထဲမှာ https://mail.google.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Go ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
3. ပြီးရင် Create an account ကိုနှိပ်. ဖုန်းနံပတ်ကလွဲလို့ ဖြည့်စရာရှိတာ ဖြည့်ပြီး Continue ဆိုတဲ့ အပြာတန်းကြီးကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. အဲဒီမှာ ဖုန်းနံပတ်တောင်းလိမ့်မယ်.. တစ်ခါတစ်လေ မတောင်းဘူး.. တောင်းခဲ့ရင် အကွက်လေးရဲ့ ဘေးက အလံလေးကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး Myanmar +95 ကိုရှာပြီးရွေးလိုက်.. ပြီးရင် ကိုယ့်ဖုန်းနံပတ်ကို 09 ကစပြီးဖြည့်လိုက်.. ကျွန်တော် ဖြည့်ပြထားတယ်.. How do we Send you codes? ရဲ့ အောက်နားမှာ Voice Call ကိုရွေး.. ပြီးရင် Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ဖုန်း တစ်လုံး( နံပတ်ကတော့ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ) ခေါ်လိမ့်မယ်.. သူပြောတဲ့ ဂဏန်း ၆ လုံးကို ဖြည့်ရမယ့် အကွက်ထဲဖြည့်လိုက်ပြီး Confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
4. Profile ဖြည့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်.. ကျော်သွားလို့လည်း ရပါတယ်.. ပြီးရင်တော့ Gmail ထဲကိုရောက်သွားပြီး Gmail Team က ပို့တဲ့ အီးမေး တွေ တွေ့ပါမယ်.. ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ..
ဖုန်းရဲ့ Home Key ကိုနှိပ်ပြီး ထွက်ပါ.. ( Home Key ဆိုတာ Huawei နဲ့ HTC မှာဆိုရင် အိမ်ပုံလေး.. ဖုန်းရဲ့ အောက်နားလေးမှာရှိတယ်. Samsung မှာဆို အောက်နားက Button အကြီးကြီး. )
ဒီမှာ Gmail ဖွင့်တာ ပြီးသွားပြီ... Gmail ရှိပြီးသားဆိုရင် အဆင့်3နဲ့4ကို လုပ်စရာမလိုဘူး.. Sign in ဝင်ထားပြီး Home နဲ့ ထွက်ထားလိုက်ပါ....
1. ဖုန်းမှာ UC Browser တင်ထားလိုက်ပါ.. မရှိရင် အောက်မှာ ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ထားလိုက်ပါ..
2. UC Browser ကိုဖွင့်ပါ.. သူ့မှာပါတဲ့ Facebook ကိုနှိပ်ပါ.
ပြီးရင် Create New Account ကိုနှိပ်ပါ..
3. ဖြည့်ရမယ့် အကွက်တွေထဲမှာ ဖြည့်ပါ.. ဒါကိုတော့ အသေးစိတ် မပြောတော့ပါဘူး.. Email မှာ ခုနက ဖွင့်ထားတဲ့ Email ကို ဖြည့်လိုက်ပါ.. ဆက်နှိပ်သွားရင်တော့ confirm code တောင်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားပါမယ်..
ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ဖုန်းရဲ့ Home Key ကိုနှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ပါ..
4. ခုနက ပြန်ထွက်ထားခဲ့တဲ့ Chrome Browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါ.. အီးမေးထဲမှာ Facebook က ပို့ထားတဲ့ အီးမေးတစ်စောင် ရောက်နေပါမယ်.. မတွေ့သေးရင် မျဉ်းတို သုံးချောင်းရဲ့ ညာဘက်က မျဉ်းကွေးလေးကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ.. Facebook က အီးမေးကို တွေ့ရင် နှိပ်လိုက်ပါ.. အဲဒီမှာ Code5လုံး ပို့ထားတာကို မှတ်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Home Key ကိုနှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်လိုက်ပါ..
5. UC Browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါ... Code ဖြည့်ရမယ့် အကွက်ထဲမှာ ခုနက မှတ်ထားတဲ့ ဂဏန်း ၅ လုံးကိုဖြည့်ပြီး Confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
6. ဒီအဆင့်မှာ Profile Information ဖြည့်ရပါမယ်.. ကျွန်တော် ပြထားသလို ဖြည့်လိုက်ပါ.. ဒါက အလွယ် ပြောတာပါ.. အကွက်တွေထဲမှာ ကိုယ်ဖြည့်ချင်တာကို ဖြည့်လို့ရပါတယ်.. Facebook က အသိအမှတ်ပြုထားတာကိုလိုချင်ရင်တော့ မြို့နာမည်၊ ကျောင်းနာမည်တွေကို ရေးပြီး ညာဘက်က Search ကိုနှိပ်.. ပေါ်လာတဲ့ မြို့၊ ကျောင်း တွေကို ရွေးထည့်နိုင်ပါတယ်.. ပြီးရင်တော့ Save ပေါ့..
7. နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Friend တွေကို Add ပေးရပါမယ်. အနည်းဆုံး Friend5ယောက်ကို Search Box ထဲမှာ ရှာပြီး Add လိုက်ပါ.. လက်ခံမယ့်သူဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.. ၂၄ နာရီအတွင်း ၅ ယောက်လုံးက Friend အဖြစ် လက်ခံရင် ပိုကောင်းပါတယ်..
8. နောက်အဆင့်တွေမှာတော့ Skip တွေကိုနှိပ်ပြီး ကျော်နိုင်ပါပြီ.. အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Facebook Account တစ်ခု လွယ်လွယ်ကူကူ ရပြီးသွားပါပြီ...
Home Key နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ကာ Facebook Application ဖွင့်ပြီး ကိုယ့်အကောင့်ကို Log in ဝင်နိုင်ပါပြီ...
ဒီ Facebook App ထဲမှာလည်း မြို့နာမည်၊ ကျောင်းနာမည်တွေ မေးပါတယ်.. အကောင့်လုပ်တုန်းကအတိုင်း ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.. ဒုတိယ အဆင့်နဲ့ တတိယအဆင့်ကို Skip လုပ်ပြီး ကျော်လိုက်ပါ.. ဒါဆို သုံးလို့ရပြီ.. အစ အဆုံး အကောင့်ဖွင့်တာ ၁၀ မိနစ်ပဲကြာပါတယ်.. လိုင်း စုတ်လို့ စောင့်နေရတာတော့ မသိဘူးနှော်...
အကောင့်ရပြီဆိုပြီး အားရဝမ်းသာ ဖြစ်မနေခင် သိထားရမယ့် စည်းကမ်းလေးတွေ ပြောပြပါအုံးမယ်..
1. ၂၄ နာရီအတွင်း Friend ၁၀ ယောက်ထက် ပိုပြီး Request မပို့ပါနဲ့
2. အကောင့်သစ်မှာ ပို့စ် အနည်းဆုံး ၃ ခု တင်ပါ.. ပို့စ်မှာ လင့်တွေ မထည့်ပါနဲ့အုံး.. နောက် သက်တမ်း ကြာလာမှ လင့်တွေပါတဲ့ စာတွေ တင်လို့ရပါပြီ..
3. သူများ ရေးထားတာတွေကို အနည်းဆုံး ၅ ခု Like လုပ်ပါ..
4. အကောင့်သစ်ကို ခု ဖုန်းနဲ့ သုံး၊ ခဏနေ ကွန်ပျူတာနဲ့သုံး မလုပ်ပါနဲ့အုံး.. အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီတော့ ဖုန်းနဲ့ပဲ သုံးနေလိုက်ပါ...
ဒါဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါပြီ.. ဘယ်တော့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ကုဒ်တောင်းမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး....
နောက်တစ်ခုက မိတ်ဆွေတွေကို သေသေချာချာ ရှင်းပြထားပါလျက်နဲ့ Facebook အကောင့်လေး ဖွင့်ပေးပါ.. Facebook အကောင့် ဝယ်ချင်လို့ပါဆိုပြီး လာမပြောပါနဲ့.. ကျွန်တော် အဲဒီဝန်ဆောင်မှု မလုပ်ပေးပါခင်ဗျာ..
အထက်ပါနည်းအတိုင်း တစ်နေ့ကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်နိုင်ပါတယ်.. ဖုန်းရဲ့ Setting> Application> Manage Application သို့မဟုတ် Setting> More> Application Manager ကိုနှိပ်.. Chrome ကိုနှိပ်.. Clear Data လုပ်.. UC Browser ကိုလည်း Clear Data လုပ်ပြီး အကောင့်သစ် နောက်တစ်ခု ထပ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်...
Temple Angry for Android Game
Kyaw Myo Tun at 3:55:00 AM 0
ဒီgame လေးကတော့ game အမျိုးအစား
မောင်ပေါက်< Knowledge Note> www.maungpauk.org
Powerboat Racing game for Android game
Kyaw Myo Tun at 3:54:00 AM 0
kaungkalay တင်ပေးလိုက်တာကတော့ ကလေး
လေးတွေ အကြိုက်ပေါ့ power Ranger က
ရေထဲမှာ အမောင်းပြိုင်မယ့် game ပါ ပထမ
ရသွားရင်တော့ ဒုတိယ lock က unlock ဖြစ်
သွားပါလိမ့်မယ် game ဆော့သည့် နေရာမှာလည်း screen ကို လက်နဲ့ထိစရာမလိုပဲ
ဆော့ရပါမယ် screen သက်သာတာပေါ့
game နာမည်က powerboat racing
Strike Team 3D for Android game
Kyaw Myo Tun at 3:53:00 AM 0
counter game ကို ဆော့ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက် ဒီgame ဟာလွယ်ကူစေမှာပါ ဒီgame ဟာလည်း
counter လိုပါပဲ လူဆိုးတွေ လိုက်သတ်ပေးရပါ
Huawei Y535D-C00 Official Firmware B142
Huawei Y535D-C00 firmware (Y535D-C00, Android 4.3, V100R001C92B142, China Telecom)
Download : 348.94 MB
Shwebook Dictionary Pro v 3.3.0 for android(latest version)
Than Toe Aung at 9:11:00 PM 0
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် အသုံးဝင်အဘိဓာန်လေး Shwebook pro v 3.3.0 ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ dictionary လေးက အင်္ဂလိပ်စာလိုက်စားနေသူတွေ၊အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုံးမကြွယ်ဝ သူတွေအတွက် ကိုယ်နဲ့လက်တစ်ကမ်းမှာထားရှိသင့်တဲ့ မိုဘိုင်းဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဘိဓာန်လေးထဲမှာ ကိုယ်သိလိုတဲ့ စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်၊မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ် ရိုက်ယူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် အင်္ဂလိပ်အသံထွက်မှားမှာကြောင့်လို့ ဆွံအပြီး မထွက်နိုင်ဘဲဖြစ်နေသူတွေ အတွက် ပါ အသံထွက် မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်၊ဒါအပြင် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများနဲ့ယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးမယ့် တရုတ်ဘာသာစကားပါ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်စာလေ့လာနေသူများအတွက်လည်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အဘိဓာန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုလိုသူများအောက်မှာရယူပါ။
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >> http://www.myanmarmobileapp.com/2014/07/29/shwebook-dictionary-pro-v-3-3-0-for-androidlatest-version/
အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် Android App
Than Toe Aung at 2:03:00 PM 0
ဒီ Android ဖုန်းဆော့ဝဲလေးရေးပြီး တရားတွေတော်တော်နာလိုက်ရပါတယ်။
- ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာ ၏ အဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ် တရားတော် အား Android Application အနေဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးရေးသားပူဇော်ပါသည်။ စာအနေနဲ့ရော တရားအသံအနေနဲ့ပါ ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါမည်။ မြတ်စွာဘုရားက မိဘကျေးဇူးဆပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီ application ကို လူကြီးမိဘတွေဖုန်းမှာသွင်းပေးထား၍အဘိဓမ္မာတရားနာစေခြင်းအားဖြင့် မိဘကျေးဇူးးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဆပ်ရာရောက်ပါတယ် လူငယ်တွေရဲ့ဖုန်းတွေမှာသွင်းပြီး တရားနာခြင်းအားဖြင့်လည်းကုသိုလ်တွေရရှိမှာကြောင့် အကျိုးများပါတယ်။ အဘိဓမ္မာအကျဥ်းချုပ် For Android ကိုအောက်က link ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
Thet Naing Soe ( Myanmar Mobile App Store)
Than Toe Aung at 11:02:00 AM 0
ရန်ကုန်မှာဘစ်ကားစီးရင် စီးရမယ့်ဘစ်ကားမသိတာ၊ ဘစ်ကားတွေဘယ်ရောက်လဲမသိတာ မျိုးတွေကိုအဆင်ပြေစေဖို့ 'Yangon Buses' iOS Application လုပ်ထားပါတယ်။ App Store ပေါ်မှာ Free Download လုပ်နိုင်ပါတယ်
http://goo.gl/7ETVZB ဒီလင့်ခ်မှာ Download ပါ
Android Application Recorder
mmitdeveloper at 4:33:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ကိုယ်ပိုင် အသံဖိုင် တွေဖန်တီးချင် တဲ့သူငယ်ချင်းများတွက်
Android Application Drawing Apk
mmitdeveloper at 4:32:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဖုန်းထဲမှာပုံဆွဲရတာကြိုက်တဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များတွက်Color drawing appလေးတစ်ခုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
Android Application Notepad
မင်္ဂလာပါ။ဒီDiary appလေးကColornoteထက်ပိုကောင်းတယ်ဗျာ။ဒီဇိုင်းကလဲအဆန်းလေးစာရိုက်ရတာလဲပုံစံတစ်မျိုးDateတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင် တယ်။ရောင်စုံကာလာလေးနဲ့ဆိုတော့လှမှလှဗျာ။
mmitdeveloper at 4:31:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒီpasswordလေးက တော့ကျနော်ရှေ့မှာတင် ခဲ့တုန်းကPassword walletနဲ့တော့သိပ်မကွာဘူး။walletက accountတစ်ခုလုံးရဲ့dataတွေကိုသိမ်းဆည်းပေးတယ်။ဒီpassword safeက တော့အရေးကြီးတဲ့passwordတွေကိုလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းပေးထားတယ်။ကြိုက်တာယူသုံးပေါ့။နှစ်ခုလုံးကသူ့အားသာချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
mmitdeveloper at 4:30:00 AM 0
မင်္ဂလာပါ။ဒီAppလေးက မေးချင် တာမေးလို့ရမယ့်Apkလေးပါ။မှန်လားမမှန်လားတော့မသိဘူး။ကိုယ်က ပါးစပ်က ပြောလိုက်တယ်။လက်က လေးနဲ့အဝိုင်းလေးကိုတို့လိုက်
Min Oaker at 11:22:00 PM 0
Min Oaker at 6:32:00 PM 0
Counter Attach game for Android
Kyaw Myo Tun at 1:56:00 AM 0
game ဆော့ချင်သူများအတွက် kaungkalay
တွေ့တွေ့ချင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပျင်းပျင်းနဲ့
ဟိုဝင်ဒီထွက်နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာပါ kaungkalay
မဆော့လို့ ရှင်းမပြနိုင်တာ နားလည်ပေးပါ
Counter ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အတွက်
ဆော့ကောင်းမယ်game လေးလို့ ထင်ပါတယ်
download=DownloadBlue( http://m.okgame.im/app/10020?g=4&c=32 )
ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မယ့် game လေးပါ (for Android)
Kyaw Myo Tun at 1:55:00 AM 0
Aliens vs Predator game for Android လေးပါ ဆော့ချင်သူများအတွက် okgame မှ
မဆော့တော့ဘူးလေ ဒါကြောင့် မရှင်းပြတော့ဘူး
TURTIE THEFT for Android game
Kyaw Myo Tun at 1:53:00 AM 0
ဒီ game လေးကတော့ လိပ်နင်ဂျာ game လေးပါ
ကျွန်တော်တော် download မဆွဲပဲနဲ့ မှုလဆိုက်ကနေ တင်ပေးလိုက်တာပါ
မင်္ဂလာပါ။ဒီAppလေးက တော့ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့အချစ်ကိုတိုင်းတာပေးမှာပါ။ဒါတင် မက သေးဘူးဗျ။ကိုယ့်ချစ်သူပေါ်ကရာခိုင်နှုန်းနဲနေရင် ရတရာပါချေပေးဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်ညာလုပ်ဆိုပြီးအကြံညာဏ်တောင် ပေးထားပါသေးတယ်။ဘော်ဘော်တို့သ ဘောကျမှာပါနော်။
Android Application Entertainment Apk
Android Application Security Apk
မင်္ဂလာပါ။ဒီကောင် လေးက တော့သတိမေ့တက်တဲ့သူများနဲ့ပိုအဆင် ပြေပါတယ်။ကျနော်တို့တွေInternetပေါ်မှာအ ကောင့်ဖွင့်ထားတာတွေများလာတဲ့အခါအကောင့်တွေမမှတ်မိတော့တာမျိုးဖြစ်လေ့ရှိတဲ့သူများတွက်နဲ့အပြင် လုပ်ငန်းသုံးVisa card,master card,paypal,bank account,ATM accountစတာတွေထိပါ။သိမ်းစည်းထားလို့ရမယ့်Apkလေးဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးလိုမယ်ထင် ရင် တော့ဆောင် ထားလိုက်ပါ။သြော်.....ချစ်သူနဲ့ဘယ်အချိန်ကတည်းကစချစ်ခဲ့တာလဲ။ချစ်ခဲ့တာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတာပါတွက်ချက်လို့ရပါတယ်ဗျာ;)